Manampahefana Iraniana misambotra ‘olo-malaza amin’ny Instagram’, mba hanamafisana ny fifehezana ny media sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2018 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, русский, Italiano, English
Pika amin'ny lahatsary fanadihadian'ny Fampielezan-tsarin'ny Repoblika Islamikan'Iran izay nandefa ny fiaikena azo tamin'ny fanerena nataon'ireo gadra antsoin'izy ireo hoe “olo-malazan'ny Instagram,” anisan'izany i Maedeh Hojabri, 18 taona.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Mahsa Alimardani ho an'ny ARTICLE19. Azonao jerena eto ny fanambarana ARTICLE19 orizinaly.
Niteraka resabe manerantany ny fisamborana ireo mpiserasera Instagram malaza ireo taorian'ny naneren'ny governemanta an'i Hojabri, 18 taona, hibaboka ny “heloka” tamin'ny famoahana horonantsary misy ny tenany mandihy.
Nandalo ny làlana #Londra izahay androany, nandihy ho firaisankina amin'i #MaedehHojabri izay voasazy higadra an-tranomaizina noho ny fandihizana. Iray amin'ireo Iraniana be herim-po miady ho an'ny zon'olombelona i Maedeh. #DancingIsNotACrime, (tsy heloka bevava ny fandihizana). Mandihiza miaraka aminay!
Nitombo ny fifandonana manodidina ny Instagram hatramin'ny fiandohan'ny taona 2018, raha niparitaka nanerana ny firenena ny hetsi-panoherana ary nanakana ny sehatra antserasera Instagram niaraka tamin'ny Telegram ny manampahefana Iraniana. Samy malaza be ao Iran ireo tranonkala roa ireo.
Tamin'ny fiafaran'ny volana Aprily, nakatona tanteraka ny telegram — fa mbola nisokatra kosa ny Instagram. Raha tokony hanakatona ny sehatra, dia toa nampiasa azy io mba hanarahany ny zavatra ataon'ireo Iraniana, sy hifehezana ny votoaty Instagram amin'ny alalan'ny fisamborana ireo tsy manaraka ny lalàna mifehy ny firenena ny manampahefana.
Nanomboka nandrahona ny hanivana ny Instagram ny fitsarana tamin'ny fiandohan'ny volana jolay 2018, milaza fa nahafahana nanao “hetsika tsy ara-dalàna” izay nataon'ireo lazaina fa olo-malaza amin'ny Instagram.
Inona no nitranga tamin'i Maedeh Hojabri
Tsy navitrika tao amin'ny haino aman-jery sosialy hatramin'ny volana May i Hojabri – saingy tsy fantatra ny momba azy hatramin'ny 9 Jolay, raha tsy namoaka lahatsary misy fiaikena noterena ny Fampielezam-peo sy sarin'ny Repoblika Islamikan'i Iran (IRIB) izay ahitana mpisera Instagram gadra maromaro, anisan'izany i Hojabri.
Na dia tsy navoaka hatramin'ny volana jolay aza ireo lahatsary ireo, dia toa noterena hanao fiaikena ireo gadra ireo fotoana fohy taorian'ny nisamborana azy ireo. Milaza ny lehilahy iray voafonja fantatra amin'ny anarana hoe Kami Yousefi fa ny volana Jiona izy no nanao ny fiaikeny. Tamin'ny fotoana iray, misy olona ao ambadiky ny fakantsary manontany vehivavy voafonja iray raha fantatry ny fianakaviany fa nosamborina izy. Namaly izy, nilaza tamin'ny fakantsary hoe: ​​”fantatr'izy ireo raha tonga tao an-tranonay hisambotra ahy ny maraina izy ireo.”
Sary iray manjavozavo misy an'i Maedeh Hojabri mitomany sy mibaboka fa namoaka horonantsary misy ny tenany mandihy tao amin'ny Instagram tao amin'ny fahitalavi-pirenena.
Tamin'ny 3 Jolay 2018, nanambara tamin'ny vaovao ampahany ofisialy Fars ny mpampanoa lalàna lefitra Hajatoleslam Mohamad Mosadegh, fa “nisy ireo hetsika teo ambanin'ny lohateny hoe olo-malaza ao amin'ny sehatra antserasera sy ny fanararaotana fitadiavam-bola.” Nilaza ity mpampanoa lalàna lefitra ity fa noho ireo ahiahy ireo, dia tsy maintsy manapaka ny tanan'ireo olona [avy amin'ny Instagram] ny biraon'ny fampanoavana ary mamerina ny fahatokisana eo amin'ny fiarahamonina.”
Tsy nisy fiampangana napetraka tamin'ireo gadra tamin'ny fomba ofisialy. Na dia tamin'ny andron'ny fandefasana ny horonantsary aza, nilaza tamin'ny Sampam-baovaon'ny Asa ao Iran (ILNA) ny lehiben'ny polisy misahana ny aterineto ao Tehran (fantatra amin'ny anarana hoe FATA), fa nogadraina, indrindra tao Tehran ireo mpitantana ny pejy Instagram “heloka bevava” maromaro, ary nisy ny “fepetra noraisina mifanaraka amin'izany”. Nilaza i Kazemi fa mifandraika amin'ireo “olo-malaza amin'ny pejy Instagram” isan-karazany ireo fisamborana ireo. Mpitsabo aretin-tsaina Dr. Hagh Ranjbar, nohadihadian'ny IRIB tamin'ny fahitalavitr'izy ireo tamin'ny 9 Jolay, niresaka momba ity olana ity ho “aretina ara-piarahamonina eo amin'ireo olo-malazan'ny pejy Instagram izay miezaka mampiroborobo ny tenany.”
Lahatsary fanadihadian'ny IRIB momba ny fisamborana tao amin'ny Instagram, amin'ny teny Persiana.
Araka ny Andininy faha-638 amin'ny lalàna famaizana Islamika Iraniana, heverina ho “fihetsika manota” ny mandihy ary azo saziana roa volana an-tranomaizina sy vely karavasy 74 (jereo ny antsipiriany feno amin'ny andininy 638 etsy ambany). Fiampangana toy izany koa no natao tamin'ny volana May 2014 tamin'ireo Iraniana maromaro izay nanao sy nizara lahatsary fanohanana ny hira “Happy” an'i Pharrell Williams tao amin'ny media sosialy.
Manjaka ny fandikan-dalàna amin'ny fizotry ny raharaham-pitsarana
Ny fiaikena noterena dia manampy trotraka ny ahiahy hatry ny ela mikasika ny fanitsakitsahana ny fizotry ny raharaham-pitsarana ao amin'ny rafi-pitsarana ao amin'ny firenena, sy ny fampiasana ny rafitra fahitalavi-panjakana mba hampiroborobo ny fitantaran'ny governemanta momba ireo mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanao gazety, mpampianatra ary mpisera media sosialy nosamborina. Nampiasaina ny fampielezan-tsary IRIB teo aloha mba hampiroboroboana ny teorian'ny teti-dratsy mamely ireo mizaka zom-pirenena Nazanin Zaghari Ratcliffe sy Seyed Kavous-Emami.
Tamin'ny tatitra taona 2014, nampiseho ny Ivontoeran'ny Zon'olombelona ao Iran fa matetika tanterahina eo ambany fandrahonana fampijaliana ny “fiaikena” noterana ary avy eo alefan'ny fampahalalam-baovao tantanin'ny fanjakana IRIB ihany mba hanamarinana ireo fanenjehana ara-politika.
Hatramin'ny volana Desambra, niatrika olana vaovao amin'ny fidirana aterineto sy fandraisana anjara amin'ny lahateny antserasera ny Iraniana – nisy ny fanakanana ny fidiran'ny vahiny antserasera, ny sivana amin'ny sehatra fandefasan-kafatra be mpisera Telegram, ary maro ireo fisamborana mpisera media sosialy, mpanao gazety, mpikatroka sy mpiaro ny zon'olombelona.
Ho setrin'ny fanambaràn'ny fitsarana fa hosivanina ny Instagram, nisioka ny Minisitry ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisan'i Rouhani fa tsaho avokoa izany. Saingy, nilaza izy fa ny famahana ny fanivanana ny Twitter, izay nakatona tany Iran hatramin'ny taona 2009, no tena heverina.
Tsy vaovao intsony ny raharaha izay narahana fanivanana ny tolotra aterineto isan-karazany. Horesahana amin'ny fivoriana manaraka ataon'ny vondron'asa ny famahana ny fanivanana ny Twitter mba hamaritana izay votoaty manafintohina. Ny vaovao amin'izany dia ny fifanakalozan-kevitra momba ity vaovao tsy mari-pototra navoakan'ny haino aman-jery sasantsasany ity mba hanodinkodinana ny hevitry ny daholobe amin'ny resaka mangarahara mikasika ny fitontongan'ny vola.
Fanambarana mitovy amin'izany no nataon'ity minisitra ity tato anatin'ny herinandro talohan'ny nanakanan'ny fitsarana ny Telegram tamin'ny faran'ny volana Aprily.
Mandritra izany, nilaza hatrany ho an'ny fahalalahana antserasera lehibebe kokoa ny fitondran'i Rouhani. Saingy nahatonga ireo fampanantenana ireo ho foana ny zava-nitranga tamin'ny volana vitsy lasa.
Andininy faha-638 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Islamika Iraniana:
Izay rehetra eny amin'ny toerana sy lalam-bahoaka ka manao hetsika harām (manafintohina) am-pahibemaso, dia, ankoatra ny sazy omena ho an'ny hetsika, dia higadra roa volana an-tranomaizina na vely karavasy hatramin'ny 74; ary raha manao fihetsika tsy maha-voasazy izy ireo saingy mandika ny fahamendreham-bahoaka, dia ho voasazy folo andro hatramin'ny roa volana an-tranomaizina na vely karavasy hatramin'ny 74.
Fanamarihana – Ny vehivavy, izay miseho eny amin'ny toerana sy lalam-bahoaka ka tsy manao hijab Islamika, dia homelohina folo andro ka hatramin'ny roa volana an-tranomaizina na lamandy dimy alina hatramin'ny dimy hetsy Rials.